बोटलको पानी १० रुपैयाँमा बेच्ने !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/बोटलको पानी १० रुपैयाँमा बेच्ने !!
काठमाडौं । नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघले लकडाउन अवधिभर १० रुपैयाँमा पानी बेच्ने निर्णय गरेको छ। संघले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अहिलेको लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन अवधिभर १० रुपैयाँमा पानी बेच्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
अहिले एक लिटर बोटलको पानीको खुद्रा मूल्य २० रुपैयाँ रहेकोमा लकडाउन अवधिभरका लागि खुद्रा मूल्य १० रुपैयाँ कायम गरिएको संघका अध्यक्ष सुवास भण्डारीले जानकारी दिए । तर, उपभोक्ताले पानी किन्दा ६० पिस किन्नुपर्ने सर्त भने संघले राखेको छ ।
कोरोना लाग्छ भन्दै भाडामा बस्‍ने नर्सलाई घरभेटीले घोक्राउँदै निकाले !
८० वर्षीया एकल महिला हीरा`माया राईलाई छिमे`कीले बनाइदिए ओत लाग्ने घर !!